A BuddhismworldAdmin သည် ဇူလှိုင် 25, 2011 က 4:41pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အရှင်ဘု၇ားတပည့်တော် မရှင်းတာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘု၇ား ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလတရားထဲမှာ ဘုရားဟောကြားသောနစ္စ ဂီတ ၀ါဒိတ ကအကုသိုလ် မုဆိုးတစ်သက်လုပ်လုံးသတ်သောအကုသိုလ်ထက် တောင်ယာတစ်ကွက် မီးရှိုသောအကုသိုလ်သည်ပိုပြီးအပြစ်များတယ်..တောင်ယာတစ်ကွက်မီးရှိုသောအကုသိုထက် ဇာတ်သဘင်တစ်ညကြည့်သောအားကုသိုလ်က ပိုများသည်လို့ တပည့်တော် နာကြားဖူးပါသည်ဘု၇ား ..........သို့ပါသောကြောင့် သီချင်းနားထောင် ခြင်း ....video ဇတ်လမ်းများကြည့်ခြင်း...သည် (၇) နစ္စ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒဿန မာလာဂန္ဓ ၀ိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ၀ိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။ ဆိုသော၈ပါးသီလထဲကနံပါတ်(၇)ကိုထိနေပါသည်။ သီချင်းနားထောင်ခြင်း..video ဇတ်လမ်းများကြည့်ခြင်းသည်..လူသားများအတွက်အပြစ်ရှိပါသလား....?(၈)ပါးသီလမယူပဲသီချင်းနားထောင်တာ..video...ဇတ်လမ်းကြည့်ရင်အပြစ်ရှိပါသလား.......? တပည့်တော်သည်အထက်ပါ ကိစ္စတွေကိုမရှင်းမလင်းနားမလည်သဘောမပေါက်နိုင်ပါသဖြင့် ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များဖြေကြားပေးပါရန်.......တပည့်တော်ကောင်းမြတ်မင်းမှ ရိုသေစွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်မြတ်တို့ဘု၇ား။
A BuddhismworldAdmin သည် ဇူလှိုင် 14, 2011 က 10:28pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
(ကျနော်တခုလောက်မေးချင်ပါတယ် နိဗ္ဗာန်ဝင်တောမယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်သှုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုပြီးမြင်ရပါသလား ?ဘယ်လိုမြင်ရပါလဲ........? ဘာကြောင်းနိဗ္ဗာန်လိုပြောနိင်တာလဲ ......?ကျေးဇှုးပြှုှုှုှုှုှုဖြေကြားပေးပါ။)တပည့်တော်ထံကိုစာရေးပြီးမေးထားတဲ့မေးခွန်းပါဘုရား.....မေးတဲ့သူက(
zawmintun)sittwe ပါ။ ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားမေတ္တာရှေထားပြီးဖြေကြားပေးတော်မူပါရန်တပည့်တော်ကောင်းမြတ်မင်းမှရိုသေးစွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။